16,305,364 unique visits
Ciidamadda Dowladda Somaliya oo madaxa la-gelli la’ Qabuuraha Bakaraat, Carafaat, Mahad Alle iyo Carbiska
Ciidamadda Dowladda Soomaaliya ayaa waxay kari la’ yihiin inay si toos ah ay iskugu fidiyaan qeybo ka mid ah Jidka Warshadaha, iyagoo iska caabin xoog leh kala kulmaaya dagaal-yahano taabacsan Shabaab.
Laacib on August 09 2011 23:04:51 ·
Read More · 0 Comments · 2213 Reads
· Raa’isal Wasaare Gaas oo si xasaasi leh maanta uga hadlay dalka Somaliya “Gaas ma Farmaajo Laba baa”?
Raa’isal Wasaaraha Dowladda Soomaaliya ayaa wuxuu maanta uu si xasaasi leh uu uga hadlay abaaraha baahsan ee riiqay dalka iyo dadka Soomaaliyeed, isagoo sheegay in abaaruhu ay gacan ka geysan doonaan.
Laacib on August 09 2011 22:13:14 ·
Read More · 0 Comments · 1852 Reads
· Shir balaaran oo maanta ka dhacay Aqalka Madaxtooyada ee Villa Somalia "Maxaa ka soo baxay"
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socday Midowga Yurub iyo wafdi kale oo ka socday Bisha Cas ee dalka Iran. Laacib on August 09 2011 21:59:09 ·
Read More · 0 Comments · 1524 Reads
· Xukuumadda Somaliya oo gacanta ku dhigtay dagaal-yahano ka tirsan Xarakada Al Shabaab “Daawo Sawirada”
Ciidamadda Booliska ee Dowladda Soomaaliya oo maanta dib ula wareegay ammaanka suuqa weyn ee Bakaaraha ayaa waxay ka sameeyeen dhaq dhaqaaqyo goos goos ah oo ay ku soo qabteen kooxo ka tirsan Shabaab.
Shiil on August 09 2011 18:09:17 ·
Read More · 0 Comments · 4694 Reads
· Axmed Diiriye “Adeer Dalka iyo Dadka, dalkaa badan ee heshiiya uun baa dhaheynaa” Axmed Diiriye ayaa wuxuu sheegay in Odayaasha Dhaqanka Soomaaliyeed ay ka qeyb qaadan karayaan nabadda iyo kala dambeenta, isagoo sheegay in Odayaasha Dhaqanka ay yihiin kuwo caqliga wanaagsan u saaxiibka ah.
Shiil on August 09 2011 17:52:47 ·
Read More · 0 Comments · 1170 Reads
· Dowlada Somaliya oo sheegtay inay macquul tahay in dhalinyarada Shabaab ay waxbarasho dibadaha ah u qaado
Xukuumadda Soomaaliya oo olole xoog leh ugu jirta sidii ay gacanta ugu dhigi laheyd Ciidamadda Xarakada AL Shabaab ee ku sugan magaaladda Muqdisho ayaa waxay sheegtay inay u heyso fursado balaaran.
Shiil on August 09 2011 17:44:32 ·
Read More · 0 Comments · 757 Reads
· Dowladda Soomaaliya iyo Xarakada Al Shabaab oo maanta iskugu jawaabay hal iyo hal “Aqriso” Dowladda Soomaaliya oo dagaalo xoog leh kula jirta Xarakada Al Shabaab ayaa waxay ugu baaqday inay isa soo dhiibaan, iyadoo ay Xarakada Al Shabaab iyana ku hanjabtay in dagaalada ay sii wadi doonto.
Shiil on August 09 2011 16:05:46 ·
Read More · 0 Comments · 2344 Reads
· Madaxweynaha Soomaaliya oo maanta gaaray Tanzania iyo xog aanu ka helnay sababaha uu u aaday Madaxweynaha Dowladda Soomaaliya ayaa wuxuu maanta uu gaaray dalka Tanzania, iyadoo uu kullan balaaran uu la-qaadan doono masuuliyiinta sar sare ee hogaamisa Dowladda Tanzania.
Shiil on August 09 2011 15:40:57 ·
Read More · 0 Comments · 2124 Reads
· Culima’udiinka Ahlu Sunada Gobolada Dhexe oo ay maanta ka soo yeertay qaylo dhaan xoogan
Culima’udiinka Ahlu Sunnah Wal Jameeca ee Gobolada Dhexe ayaa waxay qaylo dhaan xoog leh ay ka muujiyeen abaaraha baahsan ee ka jira Gobolka Galgaduud iyo qul-qulka dadka oo mid si xowli leh ku soconaaya ah.
Shiil on August 09 2011 15:26:17 ·
· Isbadal balaaran oo maanta lagu sameeyay suuqa caalamiga ah ee Bakaaraha iyo Dowladda oo ka hadashay Dowladda Soomaaliya ayaa waxay maanta ay isbadal balaaran ay ku sameysay gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha, kadib markii seddex cisho kahor ay kala wareegeen Xoogaga Xarakada Al Shabaab.
Shiil on August 09 2011 13:01:43 ·
Read More · 0 Comments · 2770 Reads
· Al Shabaab oo sheegtay in wax ka wanaagsan aysan jirin dagaalada ku dhufo oo ka dhaqaaq ah “Sababtu Maxay Tahay”? Kadib markii Xarakada Al Shabaab ay iskaga baxday inta badan magaaladda Muqdisho ayna bilowday dagaalo ku dhufo oo ka dhaqaaq ah ayaa waxay Xarakada Al Shabaab ay sheegtay, in dagaaladaasi ay ku guuleysteen.
New York on August 09 2011 12:41:50 ·
Read More · 0 Comments · 1681 Reads
· Kullan balaaran oo maanta ka dhacay Aqalka Madaxtooyada ee Villa Somalia "Aqriso"
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi heer sare ah oo ka socday Qaramada Midoobay oo ay ka mid ahaayeen Mark Bowden, Isu-Duwaha Xiriirinta iyo Gar-gaarka Bani’aadanimo ee Qaramada Midoobay, Bruno Geddo, Madaxa UNHCR Somalia, Alvaro Rodriguez, Madaxa UNDP Somalia, Kiki Gbeho, Madaxa OCHA, iyo saraakiil ka socotay WFP, UNHCR, UNDP iyo OCHA.
New York on August 09 2011 12:29:32 ·
· Dagaalo faraha looga gubtay oo ka dhacay degmada Madiina ee magaaladda Muqdisho “Aqriso”
Dagaalo qaraar oo qorsheysan ayaa waxay xalay ay ka dhaceen magaaladda caasimadda ah ee Muqdiho, waxayna taasi ka dambeysay kadib markii weeraro faraha looga gubtay ay soo qaadeen Ciidamadda Xarakada Al Shabaab.
New York on August 09 2011 12:26:27 ·
Read More · 0 Comments · 2444 Reads
· Naftaada U Faa’iidey Si Beri Lagaaga Faa’iideysto “Barnaamij Xiiso Badan”
Barnaamijkaan oo aanu ugu magac-darnay Naftaada U Faa’iidey Si Beri Lagaaga Faa’iideysto ayaa wuxuu socon doonaa, inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan,, iyadoo uu noqon doono mid ay si weyn uga helli doonaan qeybaha kala duwan ee bulshada Somaliyeed haddii uu ALLE idmo.
New York on August 09 2011 12:13:09 ·
Read More · 0 Comments · 1368 Reads
· Maxaad ka taqaanaa taariikhda Asxaabiga weyn ee Al Baraa Ibnu Maalin "Qiso Cajiib Badan"
"BARAA MADAX HA UGA DHIGINA MID KA MID AH CIIDAMADA MUSLIMIINTA CABSI LAGA CABSANAYO INUU GEESINIMADIISA KU JEBIYO CIIDANKIISA" CUMAR BINU KHADAAB.
New York on August 09 2011 12:05:20 ·
Read More · 0 Comments · 640 Reads
· Wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda caalamka "Qubano Xiiso Leh"
Ramadan Kareem! Akhristayaasha sharafta leh meel kasta oo aad joogtaan waa Wargeysyada Yurub Iyo Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda.
New York on August 09 2011 11:57:26 ·
Read More · 0 Comments · 665 Reads
· Ciyaar xiiso leh oo dhex marto Ingiriiska iyo Holland oo laga cabsi qabo in'ay qabsoomi weydo "Aqriso"
Kulanka saaxiibtinimo ee arbacada berri ah Wembley ku dhexmari lahaa England iyo Netherlands ayaa shaki la gelinayaa ka dib markii boliiska magaalada London ay ku taliyeen in la baajiyo labo kulan oo ka tirsan koobka Carling Cup.
New York on August 09 2011 11:54:04 ·
Read More · 0 Comments · 950 Reads
· Wararkii ugu dambeeyay dagaalo khasaaro geystay oo ka dhacay magaaladda Muqdisho “Aqriso”
Dagaalo ayaa waxay maanta ay ka dhaceen magaaladda caasimadda ah ee Muqdisho, iyadoo uu u dhaxeeyay Ciidamadda Xoogga Dalka Soomaaliyeed oo ay kaabayaan Ciidamadda Midowga Afrika ee Amisom iyo Xarakada Al Shabaab oo dhinac ah.
Laacib on August 09 2011 00:22:32 ·
Read More · 0 Comments · 2407 Reads
· Ciidamadda Dowladda Soomaaliya oo maanta ka jawaabay talaabo ay qaadeen Ciidamadda Amisom Xukuumadda Soomaaliya ayaa waxay maanta ay ciidamo xoog leh ay geysay qeybo ka mid ah degmooyinka Wardhiigleey iyo Yaaqshiid ee Gobolka Banaadir, iyagoo ku dayanaaya talaabo ay maanta Amisom horumar ku sameysay.
Laacib on August 09 2011 00:00:58 ·
Read More · 0 Comments · 3317 Reads
· Ciidamadda Amisom oo saldhig milatari ka sameystay dhismihii ay ku taallay Idaacada Horn Afrik Ciidamadda Midowga Afrika ee Amisom oo dagaalo qaraar kula jira Xoogaga Xarakada Al Shabaab ayaa waxay maanta ay saldhig balaaran ay ka sameysteen daartii ay ku taallay Idaacada Horn Afrik ee magaaladda Muqdisho.
Laacib on August 08 2011 23:50:13 ·
Read More · 0 Comments · 1261 Reads
· Goorma ayaa kuugu dambeysay Stadium Muqdisho, Ifka Xalane, Juulo Jawaay iyo Cali Kamiin “Daawo Sawirada”
Kadib markii Xarakada Al Shabaab ay iskaga baxday inta badan magaaladda caasimadda ah ee Muqdisho ayaa waxay Ciidamadda Xoogga Dalka Soomaaliyeed iyo Ciidamadda Midowga Afrika ee Amisom ay la-wareegeen goobo badan oo uu Shabaabku iskaga baxay.
Laacib on August 08 2011 23:37:42 ·
Read More · 0 Comments · 4781 Reads
· Page 474 of 789: 1...471472473474475476477...789